Yenza i-photomontage eyiyo kunye ne-Photoshop yeeprojekthi zakho zemizobo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Un I-photomontage eyiyo kunye ne-Photoshop Yinto esele yenziwe ixesha elide ngale nkqubo intle esivumela ukuba sisebenze nemifanekiso ngokungathi ngumlingo. Nokuba yeyokuzonwabisa okanye umsebenzi, Photoshop unikezela iziphumo ezizizo kuzo zonke iintlobo zokuphinda ubambe ifoto. Funda ukuqonda ezinye zeengcinga ezisisiseko yenza iimontage zakho ezizizo.
Yenza iifotomontages zakho yokudala Ukudibanisa imifanekiso yazo zonke iintlobo usebenzisa i isixhobo somzobo wobuchule esetyenziswe ngabaqulunqi, abafoti kunye nabazobi bemizobo. Uninzi lwe ukupapashwa Namhlanje kuyenziwa ngezi ndlela kwaye iziphumo ziyamangalisa. Ayinamsebenzi ukuba ungobuchwephesha okanye uyenzela ukonwaba, ungafunda ukwenza ii-montage zeefoto kwaye ube ligcisa.
ukuba yenza i-photomontage into yokuqala esiyifunayo kukuba ne uluvo engqondweni ukuyiphuhlisa kamva ifom yomzobo. Kukho izingqinisiso ezingenakubalwa kwi-Intanethi apho sinokufumana amagcisa azo zonke iintlobo ukusikhuthaza, enye intle kakhulu kwiifotomontages kwi UJoel robinson, Eli gcisa linomsebenzi osekwe kwiifotomontages apho lidibanisa fI-otography ene-digital retouching (kucetyiswa kakhulu ukukhuthazwa). Unokuzibona ezinye kule iphepha.
Nje ukuba sibe nombono, into elandelayo esiza kuyenza yile yiphuhlise ngokomzobo.
Ukuba indibano iza kwenziwa nge iifoto zakho kufuneka sazi imiba ethile ebalulekileyo ukuze ibandla libe neziphumo ezizizo. Ukuba yimifanekiso evela kwi-Intanethi, into esiyenzayo kukujonga ezinye ezihambelana nezi ziseko.
Khathalela i nembono
Iifoto ezine Buena calidad
Khathalela i ukukhanya
Ezi ngongoma zine zibalulekile ekwenzeni ifotomontage elungileyo, siza kuchaza nganye nganye ngokweenkcukacha ezithe kratya.
Khathalela umbono Kubalulekile ukuba iifoto zethu zibe nazo eyinyaniNgokusengqiqweni, yonke imifanekiso yemontage kufuneka ibe nembono efanayo, nangona oku kuxhomekeke kwiprojekthi esiyenzayo. Umzekelo, ukuba sifuna ukwenza i-montage yokubeka isikrweqe kumntu ojonge ngqo phambili, into echanekileyo kukuba imifanekiso yethu inombono ofanayo.
Las Iifoto kufuneka ube umgangatho ofanayo ukuze ukudityaniswa kube sengqiqweni kangangoko kunokwenzeka. Kuxhomekeka kwiprojekthi, nokuba sinomdla wokuba nomgangatho ongaphezulu kwimifanekiso, umzekelo imvelaphi engacacanga inokuba luncedo ukuba yile nto siyikhangelayo.
La ukukhanya kubalulekile ukufezekisa oko Ukuthintela okwenyani kwiprojekthi yethu yemizobo. Xa sisenza ifoto yokufota sinayo jonga kwiindawo zokukhanya ukunqanda ilanga elithe ngqo ukuba singaphandle. Ukuba imifanekiso yethu ye-Intanethi yemontage inesibane se-zenith (esivela ngentla) kufuneka siqiniseke ukuba kwiseshoni yethu ukukhanya kukhanye nesimbo se-zenith.
Ke ngoko into yokuqala ekufuneka siyenzile ukudala ifotomontage elungileyo yile Cwangcisa zonke iinkcukacha kakuhle.
Saqala wethu Ifoto ye-Photomontage kwi-Photoshop kuvulwa yonke imifanekiso.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukuqala imifanekiso yezityalo, ngoku sinokusebenzisa nayiphi na Isixhobo sokhetho seFotohop:
iluphu (magnetic, polygonal, simahla)
Nje ukuba imifanekiso isikwe, into elandelayo esiza kuyenza kukuyidlulisela kwindawo yethu yokufota apho siya khona hlanganisa yonke imifanekiso.
Inqanaba elilandelayo lungelelanisa iimpawu ezibonakalayo zemifanekisoUkuma komfanekiso ngamnye, isikali ... njl. Sibeka umfanekiso ngamnye apho uya khona ngaphandle kokugxila kwinxalenye ebonakalayo, sihlengahlengisa kuphela icandelo elibonakalayo elenza ukwakheka kwesiseko. Indlela emfutshane ulawulo + T. isetyenziselwa ukulungelelanisa ubungakanani bemifanekiso.
Nje ukuba imifanekiso ihlengahlengiswe, into elandelayo ekufuneka siyenzile yile umbala womdlalo, Ngale nto siza kusebenzisa isixhobo ulungelelwaniso lombala. Kuya kufuneka sazi ukuba umfanekiso ngamnye une umbala okhutshiweyo ezithile kwaye yiyo loo nto kufuneka sidibanise yomibini imibala ukufikelela kobo bunyani besifuna kakhulu.
Kufanele si yazi owona mbala ubalaseleyo womfanekiso wethu base ukuze ukwazi ukutshatisa umbala kuyo yonke imifanekiso, oku kunokwenziwa ngokujonga umfanekiso ngendlela eqhelekileyo. Kwimeko yalo mzekelo wesithombe, umbala obalaseleyo ubomvu.
Nje ukuba silungise umbala, oku kulandelayo ukukhanya okuchanekileyo kunye nokuthelekisa. Ukwenza oku sidala olunye ukhanyiso kunye nokwahlulahlula uhlengahlengiso oluya kusinceda ukukhanya komdlalo phakathi kwemifanekiso yemontage yethu.
Singasebenzisa olunye uhlengahlengiso Indawo yokudibanisa iziphumo ezizezinye: Uluhlu lohlengahlengiso lwamanqanaba, umaleko wokukhetha uhlengahlengiso olukhethiweyo, umaleko wokuhlengahlengisa amandla, njl.
Icebo lokufikelela kwifayile ye- esemgangathweni iifoto Kukucwangcisa umsebenzi kakuhle ngawo onke amaxesha kwaye usebenze ujonga yonke le miba ichazwe apha ngasentla. Cinga ngeprojekthi, uyihlele kwaye uyenze. Umda wethu kuphela kukucinga kwethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Yenza i-photomontage eyiyo usebenzisa i-Photoshop